Vaovao - Inona no hatao raha misy olana amin'ny gasket lohan'ny varingarina
Rehefa simba na tsy voaisy tombo-kase mafy ny gasket lohan'ny varingarina dia tsy afaka mandeha ara-dalàna ny motera ary tsy maintsy soloina eo noho eo. Ireto misy dingana manokana:
1. Esory ny fonosana valizy sy gasket.
2. Esory ny fivorian'ny sandry rocker ary alao ny tehina fanerena.
3. Vahaolana tsikelikely ary esory ny vodin-doha varingarina amin'ny dingana telo ao anaty filaharana simetrika avy amin'ny tendrony roa ka hatrany afovoany, ary esory ny lohan'ny varingarina sy ny gasket.
4. Esory ireo zavatra fandavahana amin'ny faritra iraisan'ny lohan'ny varingarina sy ny lohan'ny varingarina.
5. Avadiho mankany amin'ny sisin'ny varingarina ny lafiny malefaka na ny lafiny midadriatran'ny gazy vaovao. Ny mifanohitra amin'izany no izy ho an'ny bolongam-by misy vy ary lohan-varingarina vita amin'ny alimo.
6. Rehefa apetraka ny lohan'ny varingarina dia ampiasao aloha ny bolt positioning hametrahana ny lohan'ny varingarina. Aorian'ny fanamafisana ny lohan'ny lohan'ny varingarina dia esory ny kofehy apetraka ary apetraho ny bolt lohan'ny varingarina.
7. Mampiasà tora-pasika mba hanamafisana tsikelikely ny tselatra mahazatra mandritra ny 2-3 in-droa amin'ny filaharan'ny famongorana.
8. Apetraho amin'ny valiny tany am-boalohany ny tsorakazo fanodinana valizy sy valizy rocker arm. Aorian'ny fizahana sy fanitsiana ny fahazoana valva, apetraho ny fonosana sy ny fonony.
Yantai Ishikawa Sealing Technology Co., Ltd. dia misahana manokana amin'ny famokarana sy ny fiasan'ny takelaka famehezana, gasket ary ampinga hafanana. Izy io dia ny lefitry ny filoha lefitry ny fikambanan'i China Friction and Sealing Materials Association ary ny singa mpitantana ny Conseil Engine diesel kely misy varingarina ao amin'ny Fikambanan'ny motera anatiny. Io no lehibe indrindra any Shina Iray amin'ireo orinasa manampahaizana manokana amin'ny famokarana vokatra famehezana.
Mba hampifanarahana ny firoboroboan'ny fiarovana ny tontolo iainana iraisampirenena, ny takelaka gasket tsy asbestos namboarina sy ny takelaka gasket grafita nohamafisina dia nahazo patanty famoronana nasionaly, ary ny takelaka tsy asbestos dia neken'ny maso ivoho fanandramana manam-pahefana eropeana; vokatra azo ampinga hafanana nahazo patanty modely ilaina roa.